I-Kärjä - indlu ezele ngamabali, indlu yeendwendwe - I-Airbnb
I-Kärjä - indlu ezele ngamabali, indlu yeendwendwe
Igumbi lakho lokulala e indlu engasemva sinombuki zindwendwe onguSari
I-Kärjä House sisithili seyadi esineminyaka engama-200 ubudala esiphila ngokwembali yaso kwaye sibonelela ngeendawo zokuhlala ezizodwa kufutshane nombindi weKalajoki, kufutshane neZiko labaKhenketho laseHiekkasärkki. I-Pieteet ehlaziyiweyo inamagumbi okulala amathathu anokubhuka kwisakhiwo esikhulu, indlu yeendwendwe (iibhedi ezisi-8 zizonke) kunye neendawo ezinkulu eziqhelekileyo.
U-Piety uhlaziye iminyaka engama-200 yendlu yemithi yemveli kufutshane nombindi wesixeko saseKalajoki kunye ne-Hiekkasärkät beach resort. Amagumbi okulala amane kunye neendawo ezinkulu eziqhelekileyo.
Kule ndawo, ufumana ukujoyina ibali leholo yedolophu endala kunye nabahlali bayo bangaphambili. Zonke izinto ezithuthuzelayo zale mihla ziziswe kwixesha lokuhombisa. Amagumbi okulala amathathu aphindwe kabini, uNils, uSofia noViljami kwindlu enkulu kunye nendlu yeendwendwe eyadini yababini. Onke amagumbi angabhukishwa njengendawo yokuya eyahlukileyo.
Kwisakhiwo esikhulu, iindawo eziqhelekileyo ezixhotyiswe kakuhle: iholo, igumbi lokutyela, ikhitshi, indlu yangasese / kph. Iyadi enkulu kunye ne-terrace yokuhlala enamaqela okuhlala.
- i-wifi yamahhala kwisakhiwo esikhulu
- TV kwisakhiwo engundoqo
- umatshini wokuhlamba kunye nesomisi
- ukusetyenziswa kwe-sauna 15 €
Wamkelekile kwibali lendlu yenkundla yesithili esidala kunye nabahlali bayo bangaphambili. Yonwabela zombini ingaphakathi lembali kunye nezixhobo zangoku. Amagumbi okulala amathathu kwisakhiwo esikhulu kunye nelinye kwindlu engaphaya kweyadi. Kwisakhiwo esiphambili sineendawo eziqhelekileyo: igumbi lokuzoba, ikhitshi, iWC / igumbi lokuhlambela. Igadi enkulu enethafa kunye nefenitshala.
Umabonwakude sesona sakhiwo siphambili
- I-sauna efudumeleyo yokhuni 15 €
Indawo yokuhlala ezolileyo kunxweme lomlambo kufutshane nezinto eziluncedo edolophini. Iziko labakhenkethi laseHiekkasärkki elinolwandle olunesanti kumgama oziikhilomitha ezisi-8. Idolophu endala yasePlass kunye neemyuziyam zayo ikumgama wokuhamba. Sinikezela ngeengcebiso kwezona ndawo zokusingwa kunye nemisebenzi. Ngomrhumo owongezelelweyo, senza njengesikhokelo sendawo kwindalo ekufutshane, ukuhamba ngebhayisikili kunye nama-mushroom okanye iindawo zenkcubeko.
Indawo enoxolo ngasemlanjeni kufutshane nombindi wesixeko saseKalajoki. Umgama oya kwindawo yeholide ye-sandbar kunye nolwandle malunga neekhilomitha ezi-8. Idolophu endala iPlassi kunye neeMyuziyam zayo zikude ngeekhilomitha. Singakunika iingcebiso ngeendawo ezifanelekileyo kunye nemisebenzi. Kwintlawulo eyongezelelweyo silungiselela uhambo olukhokelwayo lokukhwela intaba, amaqunube okanye amakhowa ukuya kumahlathi ethu ompayina amangalisayo okanye kwezinye iindawo ezinomtsalane.
Flexible check-in ukusuka 3 p.m. Ngobuqu okanye ngekhabhathi ephambili. Ndicela undazise xa uza okanye uhamba. Andihlali ndikhona, kodwa ndihlala ndifumaneka kwaye ndonwabile ukuphendula nayiphi na imibuzo.
Ukungena okuguquguqukayo emva kwe-3pm. Ngobuqu okanye ngebhokisi yesitshixo. Nceda usixelele ukungena kwakho kwaye ujonge amaxesha. Asisoloko sikuloo ndawo kodwa sihlala sonwabile ukukunceda xa kukho nawuphi na umbuzo.
Flexible check-in ukusuka 3 p.m. Ngobuqu okanye ngekhabhathi ephambili. Ndicela undazise xa uza okanye uhamba. Andihlali ndikhona, kodwa ndihlala ndifumaneka kwaye ndonwabile ukuph…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Kalajoki